Ikinema, oo ah shirkad ku takhasustay wax ka qabashada aragga, ayaa hadda ah Apple | Wararka IPhone
Toddobaadkan iibsigii Apple ee shirkad la yiraahdo Ikinema ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay. Tani waa shirkad Ingiriis ah oo ku takhasustay qabashada dhaqdhaqaaqa, oo leh mashaariic xoog leh oo ku saabsan videogames iyo gaar ahaan loogu talagalay horumarinta khibradaha xaqiiqada dalwaddii.
Ikinema waa shirkadda ugu dambeysa ee u gudubta gacanta Apple, kiiskan diiwaanka shirkadduna ma aha mid foolxun haba yaraatee. Waxaan ka helnaa wadashaqeyn iyo shaqooyin shirkadaha waaweyn sida Disney, Framestore, Foundry ama Fox Waxay kaloo leeyihiin dhowr la shaqee Sony, Valve, Epic Games, Square Enix, Tencent, Ubisoft iyo Bandai Namco iyo kuwa kale.
Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in halka wax iibsiga lagu calaamadeeyay "hal shirkad oo kale ilaa liiska," kani waa mid ka mid ah kuwa waaweyn. Dareenkan, waa inaad fiirisaa shaqada la qabtay taasina waa inay bixiyaan taariikh weyn oo leh codsiyo xirfadeed iyo matoorada garaafka sida mishiinka caanka ah ee Unreal Engine ama Maya iyo kuwo kale. Shaki la'aan, si kasta oo ay shirkaddani u sheegato inay yar tahay, shaqooyinku waa kuwo awood badan oo leh saldhig aad u adag, taas oo ka dhigtay Apple inay u fiirsato la wareegisteeda maalmo yar ka horna waxay si rasmi ah u xaqiijiyeen iibsashada.
El video soo bandhigid waa wax laga naxo:
Warqadda daboolku runtii way fiican tahay in kastoo wax faahfaahin ah lama oga waxa ay Apple ku dari karto ama ku isticmaali karto tignoolajiyadan oo dhan Ikinema waxaan hubnaa inaad sifiican u ogaan doontid meesha laga sameeyo. Waxa kaliya ee la ogyahay ayaa ah in iibsigu yahay mid rasmi ah tanna lagu daro inta ka hartay wixii ay soo iibsatay Apple bilahaan aan yareyn, sida uu sheegay isla agaasimaha guud ee shirkadda Tim Cook dhowr todobaad ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ikinema, oo ah shirkad ku takhasustay saamaynta muuqaalka, ayaa hadda ah Apple
Apple Arcade wuxuu soo bandhigayaa 5 qalab cusub oo aalado, tartan iyo dagaal